१३ ओटा विकास बैंकको लाभांश क्षमता औषतमा ६.०१ %, सबैभन्दा बढी मितेरी डेभलपमेण्ट बैंकको
भदौ २६, काठमाडौं । गत आवको चौथो त्रैमासमा १३ ओटा विकास बैंकको लाभांश क्षमता औषतमा ६ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ ।
१३ ओटा विकास बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांश क्षमता मितेरी डेभलपमेण्ट बैंकको रहेको छ । उक्त कम्पनीको लाभांश क्षमता १७ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको चौथो त्रैमासमा १३ ओटा कम्पनीमध्ये दुई ओटा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंक र सिन्धु विकास बैंकको वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक रहेको हो । कामना सेवा विकास बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. १३ करोड ७४ लाख र सिन्धु विकास बैंकको रू. ५५ लाख ८६ हजार ऋणात्मक रहेको छ ।
वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेकाले यी दुई ओटा कम्पनीको लाभांश क्षमता पनि ऋणात्मक रहेको छ । ११ ओटा बैंकको गत आवको चौथो त्रैमाससमा कुल रू. १ अर्ब ४९ करोड वितरण योग्य नाफा रहेको छ ।
बैंकले आर्जन गरेको खुद नाफाबाट एनएफआरएस प्रणाली अनुसार विभिन्न शिर्षकमा छुट्याएपछिको नाफानै वितरणयोग्य नाफा हो । यस नाफाबाट नै ती कम्पनीहरुले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश बाड्ने गर्दछन् । यसबाहेक ती कम्पनीहरुले जगेडा कोषबाट पनि लाभांश वितरण गर्ने गर्दछन् ।
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कम्पनीहरुको लाभांश क्षमता कम रहेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासको अन्त्यतिरबाट फैलिएको कोरोना महामारीका कारण संक्रमण फैलिन नदिन नेपालमा गरिएको लकडाउनले चौथो त्रैमासमा कम्पनीहरुको नाफा घटेको छ ।
बन्दाबन्दीको कारणले कम्पनीका सबै शाखाहरुको किस्ता असुलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको र चौथो त्रैमासको अन्त्यतिर लकडाउन केही खुकुलो भएपनि प्रदेश सरकार स्थानीय निकायबाट निषेधाज्ञा कायमै रहेकाले कम्पनीको लगानी तथा कर्जा असुली(वित्तीय कारोबार) मा असर परेको छ ।
सोही कारण गत आवको चौथो त्रैमासमा ती कम्पनीहरुको नाफा घटेको हो । नाफा घटेसँगै वितरणयोग्य नाफा पनि घटेको छ । गत आवकोे चौथो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी वितरणयोग्य नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकको रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ४७ करोड ३३ लाख रहेको छ । सो अवधिमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक र सहारा विकास बैंकले वित्तीय विवरणमा भने वितरणयोग्य नाफा उल्लेख गरिएको छैन ।
नागबेली लघुवित्तलाई प्राप्ति पछिको मिर्मिरे लघुवित्तको शेयर सूचीकृत[२०७७ असोज, १५]